Tirada dhimashada Weerarki Elite Hotel oo korortay | Keydmedia
Tirada dhimashada Weerarki Elite Hotel oo korortay
Ugu yaraan 16 ruux ayaa ku geeriyootay, halka 30 kalena ay ku dhaawacmeen Weerarkii ka dhacay Elite Hotel.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ugu yaraan 16 ruux ayaa ku geeriyootay weerar ku dhawaad shan saacadood qaatay oo shalay gabal dhicii lagu qaaday Hotel-ka sida casriga ah loo dhisay ee Elite, kaas oo ku yaalla nawaaxiga xeebta Liido ee Muqdisho.
Dowladda Soomaaliya oo xalay xilli dambe faah-faahin ka bixisay khasaaraha weerarka, ayaa sheegtay in 16 ruux oo 5 ka mid ah yihiin kooxdii weerarka soo qaaday ay howlgalka ku geeriyoodeen, halka in ka badan 30 ruuxna ay ku dhaawacmeen.
Afhayeenka booliska Soomaaliya Saadaq doodisho oo warbaahinta la hadlay ayaa sidoo kale sheegay in ku dhawaad 300 oo ruux laga soo bad baadiyay gudaha Hotel-ka, kuwaas ku sugnaa xilliga uu weerarka bilaabanayay, waxaa uuna intaas ku daray in ay dadka la soo bad baadiyay ay isugu jiraan shacab iyo masuuliyiin dowladeed.
Dhinaca kale dad eheladooda baadi goobayo ayaa saaka gaaray gudaha Hotel-ka, waxaana la sheegayaa in maydad hor leh bur burka dhismaha Hotel-ka laga saaray, taasoo muujineyso kororka khasaaraha ka dhashay weerarkii Elite hotel.
Al-Shabaab ayaa sheegatay masuuliyadda weerarka, waxaana war ka soo baxay lagu sheegay in Hotel uu leeyahay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ku yaalla Xeebta Liido dagaalama-yaal ka tirsan Al-shabab gudaha u galeen, kadibna howlgal ka fuliyeen.
Khuburo dhinaca amniga ah ayaa su'aalo ka keenay suurta galnimada gaariga lagu qarxiyay albaabka Elite iyo sida uu ku gaaray, iyadoo magaalada afarta jiho ka xirantahay.